ဂျပန်နိုင်ငံတွင် ၂၆ နှစ်အတွင်း ပထမဆုံးအဖြစ် ဝက်တုပ်ကွေးရောဂါ ဖြစ်ပွားနေ၊ သို့သော် အာဖရိက ဝ? - Yangon Media Group
ဂျပန်နိုင်ငံတွင် ၂၆ နှစ်အတွင်း ပထမဆုံးအဖြစ် ဝက်တုပ်ကွေးရောဂါ ဖြစ်ပွားနေ၊ သို့သော် အာဖရိက ဝ?
ဂျပန်မြို့တွင်းတစ်နေရာမှ နိုင်ငံသူနိုင်ငံသားများကို တွေ့ရစဉ်။
တိုကျို၊ စက်တင်ဘာ ၉
ဂျပန်နိုင်ငံတွင် ၂၆ နှစ်အတွင်း ပထမဦးဆုံးအဖြစ် ဝက်တုပ်ကွေးရောဂါ ဖြစ်ပွားနေပြီး ဝက်သားနှင့် တောဝက်သားများ ရောင်းချနေမှုအား ကန့်သတ်ခြင်း၊ ပိတ်ပင်ခြင်းများ ပြုလုပ်ခဲ့သည်ဟု စက်တင်ဘာ ၉ ရက် သတင်းများအရသိရသည်။ သို့သော် ယင်းသည် အာဖရိက ဝက်တုပ်ကွေးရောဂါ အမျိုးအစားမဟုတ်ဟု လယ်ယာစိုက်ပျိုးရေးဌာနက ထုတ်ဖော်ပြောဆိုလိုက်သည်။
ဝက်တုပ်ကွေးရောဂါသည် ဂျပန်နိုင်ငံအလယ်ပိုင်း ဂီဖူးမြို့ ဝက်မွေးမြူရေးခြံများတွင် ဖြစ်ပွားနေကြောင်း တွေ့ရှိရသည်။ ယင်းရောဂါသည် လူကိုမကူးစက်နိုင်သော်လည်း ကျန်သော ရောဂါကင်းဝက်များအား ကူးစက်နိုင်၍ သတိပြုကြရန်ဝန်ကြီးဌာနက သတိပေးနှိုးဆော်လိုက်သည်။
အာဖရိက ဝက်တုပ်ကွေးရောဂါသည် သြဂုတ်လအစောပိုင်းက တရုတ်နိုင်ငံတွင် ပြည်နယ် ခြောက်ခုရှိ မွေးမြူရေးခြံ ၁၈ ခု၌ စတင်ဖြစ်ပွားခဲ့ကြောင်း ကုလသမဂ္ဂကမ္ဘာ့ စားနပ်ရိက္ခာအဖွဲ့(FAO)က သတင်းထုတ်ပြန်ခဲ့ပြီး အခြားသော အာရှနိုင်ငံများသို့လည်း လျင်မြန်စွာ ကူးစက်ဖြစ်ပွားနိုင်ကြောင်း သတိပေး နှိုးဆော်ချက်ထုတ်ပြန်ခဲ့ခြင်း ဖြစ်သည်။
ပါကစ္စတန် ဝန်ကြီးချုပ် အင်မရမ်ခန်းအား အသရေဖျက်မှုဖြင့် တရားစွဲဆိုထား၍ ရုံးသို့လာရောက်ရန် သမ
ဖုယွင် အထည်ချုပ်သပိတ် အစိုးရအမြန်ဆုံး ဖြေရှင်းပေးရန် လုပ်သား ၅ဝ ကျော် ရန်ကုန်မြို့လယ်၌ ဆန္ဒ?
အမေရိကန် တောင် ကာရိုလိုင်းနားတွင် ခရီးသည်တင် ရထားတိမ်းမှောက်၊ နှစ်ဦးသေ၊ ၁ဝဝ ကျော် ဒဏ်ရာရရ
မိုင်းဖုန်း ဆရာတော်ကြီးတရားပွဲ တန်ဆောင်မုန်း လပြည့်နေ့ ရန်ကုန်တွင် ကျင်းပရန် စီစဉ်နေ